Marketing Apple: lesona 10 azonao ampiharina amin'ny orinasanao | Martech Zone
Tian'ny namako ny manome fotoana sarotra ahy amin'ny maha-fanboy an'i Apple ahy. Azoko omena tsiny tanteraka izany amin'ny namana tsara iray, Bill Dawson, izay nividy ahy ny fitaovana Apple voalohany - AppleTV… ary avy eo niara-niasa tamiko tao amin'ny orinasa iray izay mpitantana ny vokatra voalohany nampiasa MacBook Pros. Mpankafy aho hatrizay ka izao, ivelan'ny Homepod sy ny seranam-piaramanidina, manana fitaovana tsirairay aho. Isaky ny fanavaozana ny rindrambaiko sy ny fikirakirana ny fitaovana, dia gaga aho amin'ny tontolo iainana ekena mifamatotra mafy izay notohizan'ny Apple ho an'ny mpanjifany. Diso fanantenana aho amin'ireo matihanina amin'ny orinasako izay manohy mitifitra an'i Apple raha manohy manova mangina ny fomba fifandraisantsika amin'ny tontolo iainantsika amin'ny alàlan'ny teknolojia.
Araka ny efa nolazaiko tao anaty kofehy tamin'ny iray amin'ireo naysayers, ny andro hiarahan'ny Fitbit, Google Home, fitaovana Windows anao, telefaona Android anao, ary Roku tsy misy tohiny. Apple dia manery ny fanavaozana eo amin'ny toerana malemy mpifaninana rehetra… ny hoe tsy miankina amin'ny tsirairay izy ireo. Izany dia nilaza fa misy foana ny toerana fanavaozana ho an'i Apple. Tena te hahita zava-baovao bebe kokoa amin'ny automatisation an-trano aho. Raha ny hevitro, Amazon dia tena mandaka ny vodiny miaraka amin'ny fahaiza-manao ho an'ny Echo.
Ampy izay no nilaza momba ny fanavaozana an'i Apple, andao hiroso amin'ny marketing izy ireo. Ny zavatra iray hajaiko momba ny varotra an'i Apple dia matetika mifantoka amin'ny hatsaran-tarehy sy kanto ny fitaovany na ny mety ho an'ny olona mifampiresaka amin'izy ireo. Tsy misy isalasalana fa ny fifantohana amin'ny hatsarana dia nanampy… nandeha namaky ny fivarotana elektronika amin'izao fotoana izao ary ny telefaona, takelaka, na solosaina finday rehetra hitanao dia dika mitovy amin'ny fitaovana Apple. Mirehareha amin'ny fitaovana ampiasain'ny olona ny olona, ​​ary manintona solosaina finday misy alàlan'ny ultralight, manify, aliminioma, unibody avy ao anaty kitaponao miaraka amin'ny fisehoana retina dia mahatsapa ho tsara foana.
Ity misy ohatra tsara iray izay anehoan'izy ireo ny iPad Pro:
Ny fahafaha-manao amin'ny dokambarotra ataon'izy ireo dia izay foana no mahazo ahy. Na mandihy mozika fotsiny amin'ny dokam-barotra iPod tany am-boalohany, na ny dokambarotr'izy ireo ao ambadiky ny Mac izay manasongadina ny sasany amin'ireo olona manan-talenta indrindra eto an-tany, dia mipoitra ao am-ponao i Apple.
Ny Vondron-tranonkala dia nanangona lesona 10 avy amin'ny paikadin'i Apple momba ny varotra izay mirakitra ireo faritra ifantohan'ny orinasa. Amin'ity sary manaraka ity, Lesona 10 amin'ny marketing amin'ny Apple, ao anatin'izy ireo:
Ataovy tsotra - Amin'ny marketing amin'ny paoma dia tsy misy fampahalalana matetika momba ny toerana sy ny fomba hividianana ny vokatra. Fa kosa, ny doka sy ny hafatra ara-barotra hafa dia mahitsy - matetika mampiseho ny vokatra ary mamela azy hiteny ho azy.
Ampiasao ny fametrahana ny vokatra - Raha vao mizara ny vokatrao ny influencer ary mampiseho ny mpanaraka azy fa mahasoa azy io dia nambolena ny voa ary namboarina ny fitarihana.
Fanamarihana momba ny tombony - Tsara ny nahazoan'ny Apple fanamarihana avy amin'ny mpanjifany.
Mifantoha amin'ny soso-kevitra momba ny sanda tokana fa tsy ny vidiny - Na inona na inona fitaovana atolotry Apple, dia ataon'izy ireo antoka fa mahatsapa ny mpanjifa fa mendrika ny mandoa ny vidiny ambonimbony kokoa. Ny iray maningana, raha ny hevitro, dia ireo mpanamboatra azy ireo.
Mijoroa amin'ny zavatra iray - Asehoy amin'ny mpihaino anao fa ny marikao dia azo isaina foana hanatontosa ny zavatra ijoroany.
Mamorona traikefa fa tsy vokatra fotsiny - Na iza na iza afaka manao vokatra, fa tsy maro no afaka mamorona traikefa ho an'ny mpanjifa tsy hay hadinoina ary mitaona azy ireo hiverina foana hatrany.
Miresaka amin'ireo mpihaino mampiasa ny fiteniny - Amin'ny alàlan'ny fisorohana ireo teny sy fanazavana izay tsy mahatafitohina fotsiny fotsiny dia nahita fomba iray hahatratrarana ny mpanjifa amin'ny sehatra vaovao i Apple izay mbola tsy fantatry ny fifaninanana.
Mamolavola Aura sy Mistery Manodidina ny zavatra ataonao - Matetika, ny mpivarotra dia milaza amin'ny mpanjifa ny zava-drehetra momba ny vokatra iray, fa i Apple kosa dia miteraka fientanam-po bebe kokoa amin'ny fihazonana vaovao sy fanaovana izay hamoahana ny sain'ny rehetra.
Antso amin'ny fihetsem-po - Ny doka nataon'i Apple dia mampiseho olona falifaly manana fotoana mahafinaritra amin'ny iPads sy iPhones fa tsy mifantoka amin'ny haben'ny fahatsiarovana na ny fiainana bateria.
Mampiasà Visual - Raha ampiasaina tsara, ny horonan-tsary sy ny sary ary ny feo manintona dia misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny traikefan'ny mpanjifa.
Ity ny sary feno:
Tags: paomamarika paomapaoma famolavolanamarketing amin'ny paomapaoma metymarikafifandraisanahery miasa manginaiPadiPad pro-barotrabarotra tetikaLahatsary Marketingmetytsotrasary